एनआई सी एसियाको लोभलाग्दो “ग्रोथ“, वितरणयोग्य मुनाफा नै अर्ब माथि ! हेरौ कम्पनी विष्लेषण – Insurance Khabar
एनआई सी एसियाको लोभलाग्दो “ग्रोथ“, वितरणयोग्य मुनाफा नै अर्ब माथि ! हेरौ कम्पनी विष्लेषण
प्रकाशित मिति : १४ माघ २०७५, सोमबार १७:३२
कम्पनीको प्रकार : वाणिज्य बैंक
रोशन कुमार न्यौपाने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
प्रधान कार्यालय : ट्रेड टावर,थापाथली
सेयर रजिष्ट्रार : एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड, बबरमहल
एनआईसी एशियाबैंकले एक हजार रुपैयाँ अंकित मुल्यमा ४ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्रमा माघ १३ गते देखि आवेदन खुला गरेको छ । ‘१० प्रतिशत एनआइसी एशिया ऋणपत्र २०८५/८६’ नाम रहेको र १० वर्ष अवधिको उक्त्त ऋणपत्रमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदर प्राप्त हुने छ । व्याज अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी हुने छ।
ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्ता आवेदन दिन सक्ने छन् ।
एनआईसि एशिया बैंक लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७५/७६को दोश्रोे त्रैमासको बित्तीय विवरण :
( नेपाल फाइनान्सीयल रिपोर्टिङ स्टान्डर्ड (एनएफआरएस) अनुसार प्रकाशित बित्तीय विवरणमा आधारित )
कम्पनीकोे सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासिक बित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७४/७५ बीच तुलना गर्दा :
बैंकले यो अवधिमा आफ्नो खुद नाफामा १६४ प्रतिशतले वृद्धि आएको छ । बैंकले यो त्रैमाससम्म १ अर्ब ५१ करोड रुपैया खुद मुनाफा कमाउन सफल भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सोहि अवधिमा बैंकले ५७ करोड १७ लाख खुद नाफा कमाएको थियो ।
चुक्ता पुँजी बढे अनुसार नाफा बढ्दा बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १४ रुपैयाँ २४ पैसा बाट बढेर ३४ रुपैयाँ २२ पैसामा आएको छ ।
निक्षेप र कर्जाको कुरा गर्दा उसले यो त्रैमासमा १ खर्ब ७५ अर्ब निक्षेप उठाई १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैंया कर्जा प्रवाह गर्न सफल भएको छ ।
निक्षेप ४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कर्जा प्रवाह ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
बैंकको मुख्य आम्दानीको कुरा गर्दा खुद ब्याज आम्दानी १३३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । त्यस्तै बैंकको संचालन नाफा १७२ प्रतिशतले वृद्धि भएर २ अर्ब १३ करोड पुगेको छ ।
ड् समिक्षा अवधिमा बैंकको निस्क्रिय कर्जा शुन्य दशमलव २६ प्रतिशतबाट बढेर शुन्य दशमलब ३ प्रतिशतमा आएको छ ।
बैंकको सिसिडि रेशियो ७८ दशमलव ७१ प्रतिशतमा रहेको छ । सिसिडी अनुपात ८० प्रतिशत नजिकै भएकाले बैंकले निक्षेप संकलनमा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।
बैंकले प्रकाशन गरेको प्रकाशित दोश्रोे त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार कोषको लागत ७ दशमलव १६ प्रतिशत, आधार व्याज दर ९ दशमलव ३३ प्रतिशत, ब्याज स्प्रेडदर ४ दशमलव ९८ प्रतिशत र वितरणयोग्य मुनाफा १ अर्ब २६ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
एनआईसि एशिया बैंककोे विगत २ वर्षको प्रमुख बित्तीय विवरण :
कम्पनीको विगत ५ वर्षका केही महत्वपूर्ण अनुपातहरु :
कम्पनीले आफ्नो खुद नाफामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सफल भएको छ । पुँजी १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा प्रति खुद नाफामा आएको १६४ प्रतिशतले वृद्धिले कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी १४० प्रतिशतले वृद्धि हुन सफल भएको छ । कम्पनी आफ्नो व्यापार व्यवसायमा निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ । कम्पनीले निक्षेप र कर्जामा क्रमश ४६ र ४८ प्रतिशतको वृद्धि गर्न सफल भएको छ ।
कम्पनीको जोखिम भारीत सम्पत्ति (सी ए आर ) भने १३ दशमलव ५६ प्रतिशतबाट घटेर ११ दशमलव ९७ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैले कम्पनीले ऋण पत्रमा जोड दिदै आएको छ । कम्पनीको आधार व्याज दर घटाउन सफल भएको छ जुन सकारातमक पक्ष रहेको छ ।
नेप्सेमा २०७५/१०/१४ गते कारोवार भएको ग्राफ
खुला : ३९१ उच्च : ३९४ न्यून : ३९१ बन्द : ३९३
(२०७५/१०/१४ गतेको कारोवार अनुसार .